ကွန်ဖူး ၅ ဖော်နှင့် ရွာသားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကွန်ဖူး ၅ ဖော်နှင့် ရွာသားများ
ကွန်ဖူး ၅ ဖော်နှင့် ရွာသားများ
- Khaing Khaing
Posted by Khaing Khaing on Mar 20, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 26 comments
ကျွန်မအခုပြောချင်တာလေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ကွန်ဖူး ၅ ဖော် နှင့် ရွာသူ/သား အချို့တွေ့ဆုံ ခဲ့ပုံလေးပါ ကွန်ဖူး ၅ ဖော်ကတော့ ကျွန်မရယ် မမအုံရယ် ကိုဖက်cat မိတိုက်မ နှင့် မိတူရတုိ့ပါပဲ တွေ့မယ့်နေရာကတော့ Market Place မှာပါ …. ၁နာရီမှာ ဆုံရန်ချိန်းထားကြ၏ သို့ပေသည့် ကျွန်မ တို့ရုံးက ၁၂ နာရီကဆင်းတော့ ဗိုက်ကလည်းဆာနေတာနှင့် ရုံးကဖယ်ရီလေးနဲ့ ဂုံးဆင်းလိုက်ပြီး Market Placeကိုသွားခဲ့တယ် ရုံးပြေးမမအုံကတော့ကြိုရောက်နှင့်လေရဲ့ ဒါပေသည့် ကားပေါ်ကနေ ရှိုးစမိုးအပြည့်နဲ့ ဆင်းနေသောကျွန်မကတော့မမြင်ပါ တူရကတော့ အားကြိုးမာန်တက် မမအုံဟိုမှာ သူ့မျက်နှာမှာပုစဉ်းကပ်နေလေရဲ့လို့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ပမာအော်နေလေတော့ ကျွန်မလည်း အပြေးအလွှားလေးမျက်စိကိုကစားကာရှာမိလေသည် ဟုတ်ပ မမအုံက မျက်မှန်ကြီးနဲ့ စတိုင်အပြည့် ဒါကိုမတူရကမသိရှာတော့ ပုစဉ်းကပ်တယ်အထင်နှင့် အော်နေလေရဲ့ မနည်းကိုပြန်ရှင်းပြရလေသည် ၃ယောက်သား စင်တာထဲကိုဝင်ခဲ့လေသည် မည်သူမှမရောက်ကြသေး ကျွန်မနဲ့မမအုံလည်း မိတူရကို ဂိတ်စောင့်ထားပြီး စင်တာထဲလျှောက်ပတ်ကြည့်နေမိ၏ မိတူရနားကိုပြန်ရောက်တော့ ကိုကြီးကမ်းနှင့် တူသော လူတစ်ယောက်မိတူရနားထိုင်လေသည် ကျွန်မကကိုကြီးကမ်းလို့ထင်မိကာ ၀မ်းသာအားရ မမအုံကိုပြောတော့ မမအုံက မဖြစ်နိုင်ဘူး မိတူရအိနြေ္ဒရနေတယ် ကိုကြီးကမ်းသာဆို သူနဲ့အီစီကလီ ရိုက်နေလောက်ပြီ ဒီကောင်မကလွယ်တာမဟုတ်ဘူး မြင်သမျှတွေ့သမျှ အားလုံးငါ့မိန်းမဆိုတဲ့အမျိုးထဲကဟာလေတဲ့ ခုပုံကမဖြစ်နိုင်ဘူး …. မိတူရနားကပ်ကာ ဟဲ့အဲဒါကိုကြီးကမ်းလားဆိုတော့ သူက မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲတဲ့ … ကျွန်မတို့လည်း ဘယ်သူမှမတွေ့တာနဲ့ကားဆီကိုပြန်လာပြီး ကားပေါ်တွင် စားသောက်ကာ အခြားသူများကိုမျှော်နေမိသည် အဲအချိန်တွင် မိတူရမှ စဖောက်တော့သည် သူ့ပုံကမရိုးမရွဖြစ်နေပြန်၏ ဘာဖြစ်သလဲပေ့ါ သူမျက်လုံးလားရာကိုကြည့်တော့ စင်တာအ၀တွင် အသားမဲမဲနှင့် နံ့သာရောင် ချည်ထည်ဂါဝန်လေးကို ၀တ်ထားသော နီဂဒိုးမကို သူကမမဆူးအထင်နှင့် ငမ်းကြောထနေသည် မမဆူးမဟုတ်မှန်းသူအသေအချာသိသောအခါ အိနြေ္ဒမရငမ်းလေတော့သည် သူ့ကိုပဲဟိုက ဟန်ရေးပြနေသလိုလိုပြောသေး၏ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ရွာသားများကိုတင်ပေးရန် အကြံရှိသော်လည်း အလှမ်းဝေးနေသောကြောင့်မရိုက်ဖြစ်လိုက် ဒါပေသည့် မပူပါလင့် အခုတင်ပေးသောပုံနှင့် လုံးဝတူပါသည်
အရင်ကဆိုလျှင် ကိုဖက်နှင့် မိတိုက်ထိုကဲ့သို့နောက်မကျတတ် ကျွန်မကစိတ်မချသဖြင့် မိတူရကို စင်တာသို့သွားခိုင်းရာ မိတူရက ဇွတ်အတင်းငြင်းဆန်နေသည် သူ့ကိုအ၀င်ပေါက်တွင် ယောက်မကိုင်သော လူကြီးက ရှေ့နောက်လာပွတ်တာသူမခံနိုင်ဘူးလို့ပြော၏ ဒါနှင့် ကျွန်မနှင့် မမအုံက အဖော်လုပ်ပြီးမိတူရနှင့်အထဲသို့တဖန်ပြန်ဝင်လိုက်ကာ ရွာသားများကိုရှာပြန်လေ၏ မည်သူ့ကိုမျှမတွေ့ ကိုကြီးကမ်းနှင့် တူသောလူကတော့ရှိနေဆဲ ကျွန်မတို့လည်း မိန်းမမာယာများနှင့် အဲလူနားတွင်မယောင်မလည်လုပ်ကာ ကိုကြီးကမ်းများဖြစ်လေမလားဆိုသည့်အတွေးနှင့် “ရွာသားတွေလည်း၁နာရီတောင်ထိုးပြီ မလာသေးဘူးနော်လို့” အဲလူနားတွင် အော်ကြီးဟစ်ကျယ်လုပ်နေမိသည် အဲလူကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကြိုးကြာကဲ့သို့ သာယာသော အသံလေးကြောင့် ခေါင်းထောင်ကြည့်ကာ သူ၏စာအုပ်ကိုဆက်ဖက်မြဲဖတ်သည့်အခါမှ ဒါဆိုကိုကြီးကမ်းမဟုတ်တန်ကောင်းရဲ့ဟု ကျွန်မနဲ့မမအုံလက်လျှော့လိုက်တော့သည် မကြာခင်မှာပဲမမဆူးက အနီရောင်အကျီလေးနှင့် ကျွန်အနားကိုကပ်လာကာ ခိုင်ခိုင်လားဟုမေးလာ သည် ကျွန်မလည်းဟုတ်ပါတယ် ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီး မမဆူးလက်ဆွဲခေါ်ဆောင်ရာနောက်သို့ ပါလာခဲ့သည် အဲမမဆူးဘေးနားတွင် ခန့်ခန့်ချောချောကြီး ဦးဦးပါလေရာ ပါရှိနေရဲ့ ဒီလိုနဲ့ကျွန်မတို့ ၅ယောက်အဖွဲ့ကျနေတုန်း ကိုMလုလင်ရောက်လာလေသည် အလဲ့သူကလည်း နံမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်သား လုလင်ငယ်သွေးတစ်ယောက်ပဲ ခင်စရာကောင်းပါတယ် အားလုံးက ကိုဖက်နဲ့မိတိုက်သာမလာသေး လည်ပင်းလည်းဘဲငန်းဖြစ်နေပြီ သူတို့ကလူသာမလာသေးတာ လမ်းလျှောက်ပြီးကျွန်မတို့ဆီလာနေပုံရသည် ဖုန်းကိုတော့ တွေ့ကရာ PCO ကနေတော့ ကျွန်မတို့ဆီကိုလှမ်းတော့ဆက်ဖော်ရသား ဒီလိုနဲ့မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ ကိုဖက်ရောက်လာလေသည် သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘီးနဲ့မဟုတ် ကိုဖက်အထဲလည်းဝင်လာရော အ၀မှာ ပုံခနဲ့လဲကျသွားလေသည် ကျွန်မတို့လည်း ပြူးတူပြာတာဖြစ်ကာ ကိုဖက်နားသို့ပြေးသွားမိလေသည် စင်တာမှ Security တွေလည်းရောက်ရှိလာ၏ ကိုဖက်ကိုဝိုင်းဝန်းဆွဲထူကြလေသည် ကိုဖက်ကလည်း ကပျာကယာလူလဲထကာ “ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ခင်ဗျားတို့ပဲ အိပ်ပြဆိုလို့ကျွန်တော်အိပ်ပြတာလေ ”ဟုပြန်လည်ဖြေကြားလေသည် အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ကိုဖက်ရယ် ကျွန်မမှာဖြင့် ကိုဖက်များ အပူကနေအအေးခန်းထဲဝင်တော့ မူးလဲကျသွားတယ်ထင်တာ … ဒီလိုနဲ့ကိုဖက်နဲ့ကျွန်မတို့ Seasons မုန့်ဆိုင်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့လေသည် ကိုဖက်ဘာနဲ့လာလဲမေးတော့သူက Taxiနဲ့ တဲ့ ပြိုင်ဘီးမပါဘူးတဲ့ အဲဒီအချိန်မိတူရက ကျွန်မကို လက်တို့သည် သူလာတာဆိုက်ကားနဲ့တဲ့ သူဝင်လာတော့ ဆိုဒ်ကားတစ်စီဖြတ်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်တဲ့ အော်ထားပါတော့လေ ကိုဖက်ရှက်မည်စိုးသောကြောင့် ကျွန်မနှုတ်ဆိပ်နေခဲ့သည် … ကိုဖက်က မမဆူးကိုနောက်၏ “မိတူရရေ ငါက ဆူးဆိုတော့သေးသေးလေးထင်တာတဲ့” ကိုဖက်ကအဲသည်လိုပြော၏ ကိုဖက်ပြောသည့်အဓိပာယ်ကျွန်နားမလည်း နားလည်းမလည်ချင် ကျွန်မစိတ်တွေက ၂နာရီအထိမရောက်လာသေးသော မိတိုက်မဆီသို့သာ ရောက်နေသည် မျက်စိမှာလည်းမငြိမ် လမ်းမဘက်သို့သာ ငေးကြည့်နေမိ၏ ဒါကိုသိသော မိတူရ အခိုင်ရေ ခုံအောက်ထဲရောက်နေလား သေချာရှာကြည့်ဦးဟု သတိပေးတော့ ကျွန်မကမန်းကတန်းငုံ့ကြည့်မိသေး မတွေ့….. မမအုံကလည်း စင်တာရှေ့အုံခုံနဲ့များကွယ်နေသလားပြောပြန်၏ ကျွန်မမတ်တပ်ရပ်ကြည့်သည် မမြင်…. မိတိုက်ကိုအဲသည်လိုရှာတာ အကြောင်းရှိသည် မိတိုက်ကို တွေ့လျှင်ကျွန်မဘာကြောင့် အဲသည်လိုပြောသည်ကို ရွာသားတွေသိလိမ့်မည်.. ဒီလိုနဲ့ မိတိုက်မလေးလုံးတုံးလုံးတုံးနှင့် ကားလမ်းကူးလာသည် ကျွန်မအရမ်းဝမ်းသာသွားသည် ဒါပေသည် မိတိုက်တွင် တစ်ခုခုထူးခြားနေသည် သူ… သူ …အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဟုတ်ပါသည် သူ့ရဲ့ဗိုက်ကလေးစူထွက်လာသည် သူမန်းမှာ ဖရဲမလား လေးပေါက်လက်ချက်လား၊ သူ့အလုပ်မှ စီအီးအို လက်ချက်လေလားမသိ ဒါပေသည့်ကျွန်မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်သည် သူ့လက်ထဲတွင် အထုပ်တစ်ထုပ်ပါလာလေသည် အဲဒါကိုလည်းကျွန်မစိတ်ဝင်စားသည် “မာစကဒ်”ကျွန်မမှာထားတာတွေ ပါလာသည့်အထင်နှင့် အထုပ်ကလေးကိုတောင်းတော့ မိတိုက်မက ကပျာကယာ သူ့ရဲ့ဗိုက်ကလေးကို အထုပ်နဲ့ ဖုံးကာ ကိုဖက်နားကိုပြေးကပ်လေသည် ထိုးမုန့်ထုပ်တွေက ကားပေါ်မေ့ကျန်ခဲ့တယ်တဲ့ ကဲကြည့်စမ်း ဘယ်လောက်ဒေါသထွက်စရာလဲ ကျွန်မလည်း ပထမသူ့ကိုသနားနေသော စိတ်များအဝေးသို့လွင့်ထွက်ခဲ့သည် သူမီးဖွားလျှင်ကူညီမည့်စိတ်များ သူရဲ့လင်ကောင်မပေါ်ပဲပူနေရှာတဲ့ဗိုက်ကလေးအတွက် ဖရဲမ သို့မဟုတ် လေးပေါက်ကိုတောင်းပန်ပြီး သူ့ကိုကလေးအဖေအမည်ခံခိုင်းရန် အကူအညီပေးချင်စိတ်များ ခုတော့ ဒေါသနှင့်အတူ လွင့်ပျောက်ကုန်ကာ မမအုံကိုလက်ဆွဲပြီး အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကာထိုနေရာမှ ထွက်ခွာခဲ့လေသည်……….. အဲသည်နောက် မိတူရ ကိုဖက်နဲ့မိတိုက်တို့ အုပ်စုဘာဆက်ဖြစ်သည်ကိုတော့ ကျွန်မမသိတော့ပါ သိလည်းမသိချင်ပါ သို့ပေသည့် ကျွန်မ `မာစကဒ်´နှင့် ပတ်သက်လျှင် မန်းမှဖရဲမလေး ရန်ကုန်အလာကိုစောင့်ကာ နောက်ထပ်ရရှိရန် အခွင့်အရေးရှိသေးသည် ……..
About Khaing Khaing
- - has written 38 post in this Website..
View all posts by Khaing Khaing →
လှတပတလေးကို ငမ်းမိရင်လဲတော်သေး ခုတော့ ကလပီနဲ့တူတဲ့ဟာကြီးကို ငမ်းမိတော့ သေပါပီအေ….. နာမည်တော့ ပျက်ပီးရင်းပျက်ရင်းပဲ
ဟိုလိပ်နင်ဂျာနဲ့ တူတဲ့ မိတိုက်စိုးက စီအီးအိုနဲ့ထင်ပါတယ်အေ…… မမအုံကလဲ ပြောချင်ပါဘူး…… ပြင်လာ ဆင်လာလိုက်တာ လန်လန်ပြန်ပြန်ထွက်ထွက် အမယ်လေး အာဟိ တော်တော်များသွားပီထင်ပါ့….
အောင်မာ သူများကို လိပ်နင်ဂျာလေးဘာလေးနဲ. သပိတ်ကစ်တိုက်ထားတဲ့ တောင်မ မိတူရ..
ညည်းတောင် အခြောက်မတွေနဲ.ပူချင်နေတာ သူများလိုမပူတော့ ကျိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေတာနေမှာပေါ့…
မမအုံ လန်တာတော့ ပြောမနေနဲ.တော့….. အိမ်ပြန်တော့ မျက်စဉ်းကိုခတ်ယူရတယ်… ခွိခွိ
ဟိတ် သူများလှတာ မနာလိုမဖြစ်ကြပါနဲ့။ ညဉ်းတို့လဲလှချင်ရင် ငါ့လို ဖားမျက်မှန်တပ်ပေါ့ ပေါ့အေ့။ ညဉ်းတို့ ၀တ်ရင်လှမှာပါအေ့။ အိမ်သာကျော်ဝင်တို့ သင်္ချာဝင်ကျော်တို့ ရှုံးသွားမှာ ပေါ့အေ။ မိတိုက်နဲ့ မိတူရ ငါမြင်ယောင်သေး ဟို ကလပ်ပြီမိန်းမလို ၀တ်ပေါ့။ ဟေဟေ
နာ့အနံ့ကို ရတာနဲ့ ဝေါင်ဝေါင်ရှေးသကွဲ့….
ဖျဲမလေးကို ဘဲအု ကျွေးပလိုက်မယ်.ဒါဗဲ …ဟွမ်း ဟွမ်း..
မိခိုင်ရေ တော်သေးတာပေါ့ ညည်းမေးလို့။
ဟိုနေကဖရဲမက သူ့အမစကဒ် တစ်ထုပ်ကြီးမလာပြီး သူ့သူငယ်ချင်းအိမ်သွားပို့ထားတာ။
ဘာလုပ်ဘို့လဲလို့မေးတော့ မိခိုင်က မှာထားလို့တဲ့။
အော် ညည်းဖရဲမကို သေချာမပြောတော့ စားရတဲ့ မာစကဒ်နဲ့ သူ့အမ စကဒ်လွဲနေတာအေ့။
တော်ကြာ သူ့ အမစကဒ်တွေညည်းဆီအထုပ်လိုက်ေ၇ာက်လာအုံးမယ်။
ဟုတ်လားလေးပေါက် ….. အော်ဒီကလေးနှယ်ဒုက္ခပါပဲ …. ဖရဲမရေ မမမှာတာ မာစကဒ်နော် မြင့်မြင့်ခင်ကထုတ်တာလေ …. မိတိုက်မ သူကကိုပေနဲ့ဟုတ်လား ထင်တော့ထင်တယ် ဒါပေမယ့် မထင်ရဲဘူး သူများသားပျိုဆိုတော့ အခုလိုလေးပေါက်ရှင်းပြမှ သိရတယ် …….. အူကိုနာသွားတာပဲ …လေးပေါက်ရေ ရီရလို့……….
အင်း သူပေါ့ ကိုပေ လေ အွန်လိုင်းကနေ သများကို အပျော်ကြံသွားတာ.. အရီးဟီးဟီး……
ဖရဲရေ အခိုင်က မြင့်မြင့်ခင် စကဒ်မှတဲ့……. မြင့်မြင့်ခင် စကဒ်က လျှော်တော့မလျှော်ရသေးဘူး… နဲနဲတော့နံမယ်နော်တဲ့ ယူချင်ယူသွားတဲ့
မောင်တော် မြို့က မီနီစကတ် ရှေ့ကွဲနောက်ကွဲအလယ်ကွဲ အကုန်ဝယ်ခဲ့မယ်နော်
သများဖြင့် မန်းလေးမှာ မိဖရဲမြှောက်ပေးလို. ဂွေးသီးပေါင်းလေး နှစ်လုံးလား စားမိပါတယ်… အမယ်မင်း အခုတော့ ဒုက္ခရောက်ပါပေါ့လား………
အေးပေါ့လေ အခိုင်တို.က သင်္ဘောသီးပဲ စားတော့ အာဟိဟိ
ဟဲ့ဟဲ့ နင်ဘာသာ တောင်းစားတုန်းက စားပြီးတော့
ခုမှ ဂွေးပေါင်းစားလို့ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် မပြောနဲ့
နောက်တခါ မန်းလေးလာရင် မကျွေးဘူး
အော်အခိုင်ရယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး… အခိုင်အတွက် မာစကဒ်ဝယ်လာခဲ့ပေမယ့် မေ့လာခဲ့တော့ နှမြောလိုက်ထာ.. ဒါနဲ. မာစကဒ်မရလဲ. အခိုင်အတွက်ဆိုပြီး ရန်ကုန်အိမ်က အဘွားစကဒ်ကို ခိုးလာခဲ့ပါသေးတယ်.. လမ်းခုလတ်မှာပဲ အဘွားက ငါ့စကဒ် ပြန်ယူခဲ့ဆိုလို…. ပြန်လှည့်ပေးခဲ့ရတာပါ…
နောက် ခိုးလို.ရရင် ရသလို.. အခိုင် အတွက် စကဒ် ယူလာခဲ့ပေးပါမယ်… နော်နော်..
-ခိုင်ရဲ့ ရေးတာကလည်း သူများမျက်နှာ ပုစဉ်းကပ်ရတယ်တဲ့။ ဖားမျက်လုံးကောက်တပ်ထားတယ် ပြောလည်းပြီးတာပဲ။ ဒီလိုရန်ကုန် ရာသီဥတု ပူပုံနဲ့ ဒီဖားမျက်လုံး မတက်ရင် ညညဆို ကိုကို့ကို လွမ်း သလိုလို မျက်ရည်က ထွက်ထွက်လာ လို့အေ့ ပူပြီး။ (အထင်ကြီးများကြီးမလားလို့)
-နီကဒိုးမ နဲ့ နောက်အသားညိုညိုလေးနဲ့ တစ်ယောက်ကလည်း မီနီ pan လေးနဲ့ လှမှလှ မိတူရတို့ငန်းပုံများပြောချင်ပါဘူးအေ မျက်လုံးတောင်ကျွတ်ထွက်မတက် နောက်က နေဖမ်းဆွဲထားလိုက်ရတယ။် ပါသွားတာ ပါသွားတာ (မျက်လုံးပြောပါတယ်အေ့)။ ဟိုကလည်း သူနားဆို တစ်ရစ်ဝဲ၀ဲ။ season ထဲမှာ မုန့်တွေ လာလာဝယ်တယ် ခဏခဏ။
– ကိုဖက် လည်း market place ကို လာတာ နောက်ကျရခြင်းအကြောင်းအရင်းက ၀ါသနာပါလို့ကားမောင်းတဲ့သူ ကားသမားနဲ့တွေ့လာတယ်လေ(လမ်းမကျွမ်းကျင်တဲ့ကားသမားငှားမိတယ်လေ)ဆိုက်ကားနဲ့လာတာကို ဆင်ခြေပေါ့လေ။ သံလွင်လမ်းကနေ market place ကိုလာတာ သိပ်ဝေးလွန်းလို့ 45 မိနစ်နီးနီးကြာတယ်။
– မိတိုက်က တော့နောက်ဆုံးမှ ရောက်လာတယ်။ 3နာရီမှလေ။ စောင့်ရလို့ စိတ်တောင်နဲနဲညိုငြင် မိသေး။ ကြာလိုက်တာအေလို့။ လာပြီလာပြီနဲ့ ဖုန်းခဏခဏဆက်ပြောနေတာလေ။ အသံသာကြားရတယ် လူကမလာနိုင်သေးလို့။ မိတိုက်လာပြီလို့ အခိုင်ပြောတဲ့ အချိန်မြင်မိလိုက်တော့ “ဟိုက်” ကနဲ့ တမိတယ်။ ကားလမ်း ပြေးကူးလာတာ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တော်တော် စိတ်ထဲ သနားမိတယ် မပေါ့မပါးကြီးနဲ့။ သူခမျာ ကိုပေ့ လက်ချက်မိတာကို ဖုန်းဖုန်းဖိဖိနဲ့ လုပ်နေရလို့ကြာသွားတာကိုး (ဟီဟိ) ကိုချင်းမစာမိလေခြင်းပေါ့လေ။ (သနားထာ သနာထာ)။ စကားပြောနေရင်း သူက အော့ နေသေးတာ။ ကိုပေ ရယ် မညှာမတာ လုပ်ရက်လေခြင်းလို့။
– ပြီးတော့ စကားခဏပြောပြီး အခိုင်နဲ့ ခရီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ စနေနေ့ အစည်းအဝေး ကလေး ကတော့ဒါပါပဲ။
ဟဟ သူကဖြင့် နောက်ဆံတတင်းတင်းနဲ.ပါအေ… ဘူလေးဆိုလား ပါလာတယ်ဆိုလားပဲ.. အဲဒါကြောင့် ဒီအပျိုကြီး တကြွကြွဖြစ်နေတာကိုးးးး…
ဒို.အပျိုကြီးများ ပြင်ထားတာ မျက်တောင်တင်ကော့တာဟုတ်ဘူး.. အကုန်ကော့လို. တော့ ဟိဟိဟိ..
စကဒ်ကလဲ ဒူးအထက်.. ဒါတော့ ထည့်မပြောဘူး…
ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်နော် တင်လိုက်ရမလား ဟဲဟဲဟဲ
နောက်တခါကြည့်ချင်ရင် နာပြမယ် သိလား
ဖြဲရေ နေကောင်းပါ့တော်။ ရန်ကုန်ကိုသာရောက်အောင်လာခဲ့။ ဘ်ိုတော်တိုက် ကတော့ ဘာတွေ အစီအမံ လုပ်မယ်မသိဘူး။ အကုန်လိုက်ကြည့်တော့ ဒါတော့် ရေ။ ငါဖြင့် ရှက်တောင်ရှက်လာတယ်။ ဓါတ်ပုံတောင်ဖမ်းရိုက်လိုက်သေး။ ဒင်း အုပ်ထိန်းသူကိုတိုင် အုံးမယ်။ ဒင်းတော်တော် အထိန်းကွပ်မဲ့နေတဲ့ အကြောင်း။ အဲဒီနေ့က လည်း တော်တော်နဲ့ ရောက်မလာဘူး။ လာဘီလာဘီနဲ့။ အသံပဲကြားရတယ်။ ချိန်းတာက တစ်နာရီ။ သူရောက်လာတာ 3နာရီ ကြားထဲ ဘယ်သူဝင်ဆွဲတယ်မသိဘူး 3နာရီမှ ဗိုက်ကလေး တစ်လုံးနဲ့ရောက်လာလေရဲ့။ ဟီဟိ။
အမှန်တော့ ဆူး အစောကြီး ရောက်ပါတယ်။ စီဇင် ကို ကြည့်လိုက်တော့ ရှော့ အကြီးစားကြီး တခု ကော်ဖီသောက်ရင်း ထိုင်နေတာ တွေ့တာနဲ့ အပေါ်တက်ပြီး ပတ်ပြေးနေတာ သတ်မှတ်ချိန်ထက် ၁၅မိနစ် နောက်ကျပြီးမှ အောက်ပြန်ဆင်းလာခဲ့တာ.. စောင့်ရတာ ကြာနေလို့ မျက်နှာ ငယ်လေးတွေနဲ့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး သိသားပဲ.. စီဇင်မှာ ထိုင်နေစောင့်နေတဲ့ သူကို အရင် နှုတ်ဆက်ပြီး သွားခေါ်လိုက်အုန်းမယ် ပြောပြီး လာခေါ်တာ.. ဟိဟိ.. ဓါတ်ပုံတွေ ထဲမှာ မြင်ဖူးလို့ သေချာ မှတ်ထားတာ ဆိုတော့ မှန်းလိုက်တာနဲ့ ကွက်တိပဲ။
မမဆူး ရှော့အကြီးစားကြီးဆိုတာဘာလဲ မီးမီးစိတ်ထဲအဲနေ့က မမဆူးက တစ်ယောက်ယောက်ခေါ်လာ မယ်ပြောတယ် ဒါပေသည့်မတွေ့ဘူး “စီဇင်မှာ ထိုင်နေစောင့်နေတဲ့ သူကို အရင် နှုတ်ဆက်ပြီး သွားခေါ်လိုက်အုန်းမယ် ပြောပြီး လာခေါ်တာ” သူဆိုတာ ဘူလဲ ဘူလဲ ကြောနော် မမဆူး တစ်ကွက်ချန်ထား တယ်မီးမီးတို့ကို ………
ရှော့က တခြား မဟုတ်ဘူး ဆူး အကို.. ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တာလည်း ၀င်ပါချင်တယ်။ ဟုတ်တာကော မဟုတ်တာကော လျှောက်ပြောပြီး နားငြီးတတ်လို့ အတိုင်အတောက လည်း ထူသေးတယ်။ ရှင်းပြရရင် စကားကြောရှည်လို့ ခပ်ကင်းကင်း နေချင်သူမို့ လမ်းမှာတွေ့ရင် မသိချင်ယောင်ကို ဆောင်နေချင်တယ်။ အရစ်ကြီးပေါ့ကွယ်..
သူကို မြင်လို့ အပေါ်တက်သွားပြီး ပြန်ဆင်းလာတော့ မရှိတော့ဘူး။ တော်သေးတာပေါ့.. မဟုတ်ရင် အစက ပြန်ရှင်းပြနေရတာနဲ့ လေကြောရှည်လွန်းလို့.. အရစ်နဲ့ မတွေ့ချင်တော့ဘူး။
ဟိတ် သူများမဖြေချင်တာတွေ ဇွတ်မမေးရဘူးလေ။
ကျားဖင်ချုပ် သိုင်း မပါလို့ 
နီဂဒိုးတောင် အလွတ်မပေးတဲ့ ကွန်ဘူး..အဲလေ ကွန်ဖူးတွေကိုတော့ ကျွတ်ကျဲသွားဘီဗျာ
အဲ … စိန်ပေါက်ပေါက်လေးပေါ်လာပြီ ပေါ်မလာအတော်ကြာလို့မျှော်နေတာ ဒီနေ့မနက်တောင် ပြောဖြစ်သေး … အသံမပေးဘာမပေးနဲ့ ဘယ်ကိုပျောက်သွားလဲစိန်ပေါက်ပေါက်လေးရဲ့ …
ပေါက်ပေါက်စိန်မ နိဂဒိုးက ချောဒယ်အေ့….အသားသာမဲတာ မျက်နှာက လန်ထွက်နေတာဘဲအေ့…… မဲမဲလေးနဲ့ချောထှာအေ့………… သင်ချင်ရင် လာသင်လေ…. သင်တန်းပေးရမှာပေါ့………ဟီးဟီး
နင်လဲ အရူးမ နှင်ထုတ်ပီးကတည်းက သူနဲ့တူတူပျောက်သွားလိုက်တာ………. ရှင်တို့လင်မယား ဘယ်မှာနေကြသဒုံး……………. အာဟိ အာဟိ
အဲဒီနေ့က ပြန်တော့ ပွင့်သစ်စမ်းမှာ တီးဆွဲတယ်…
နောက်တော့ ကားတွေငှားပြီး ကိုရွှေတိုက်က လှည်းတန်း…
ကျွန်တော်နဲ့သူရက အိမ်ကို ပြန်ကြတယ်…
တို့ ထပ်တွေ့ကြဦးမယ် သူငယ်ချင်းရယ်….
အို.မတွေ.နိုင်ပေါင်တော် ခဏခဏတွေ.ရအောင် သူနဲ. ဒို.နဲ.က သမီးရည်းစားတွေလားလို. အဟင့်